Maxaa Sabab U Ahaa In Aan Galo Xabsiga Xarunta Taraafikada? Qaybta labaad (WQ: Siciid Gahayr) - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Maxaa Sabab U Ahaa In Aan Galo Xabsiga Xarunta Taraafikada? Qaybta labaad (WQ: Siciid Gahayr)
Kiisaska maadda ah iyo carruurta aan qaangaadhin ee Taraafiga lagu xidho, waxa ka mid ah:
1. Kaaryoonle dawladda hoose eryanayso oo cadayle ku dhuftay
2. Wiil baaskiilad wata oo wiil ama oday hirdiyay
3. Canug baranboorrin wada oo wiil kale cagta ka jiidhay
Subaxnimo Hakisa (Khamiis) ayaa la i xidhay. Galabnimadii Hakis-bila (Jimcaha) ee sooyaalku ahaa 29kii Julaay 2016ka ayaa Xafiiska Dembi-baadhista la igaga qoray hadal aan ku sheegayo sidii ay wax u dhaceen, run ahaanna sidii Eebbe igu ogaa ayaa aan u warbixiyay.
“Askarigu waxa uu sheegay in buuggii cashuurta Dawladda Hoose ka lumay. Haddii aan lacagtaas la bixinnin, waxa laga jarayaa mushaharkiisa. In uu buuggaasi ka lumayna waa lagu dhaarin doonaa. Lacagtan waxa keliya dhaafi kara Maayarka Hargeysa” ayaa uu hadalkiisa sii raaciyay Xasan Sheekh oo ahaa Madaxa Baadhista Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka Somaliland.
Waan uga marag furay in buuggaasi lumay. Waxa se isweydiin lahayd khasaaruhu ma shil-wadareed baa mise keligay ayaa geystay? Iyaga ayaa ku xidhaya, gacanta bilaabaya, ku xukumaya, kuna sii deynaya. Maxkamad waxba ugama baahna!
Xadhiggaba waxa igaga darnaa hanjabaadda iyo awood-sheegashada “Haddii aan maxkamadda la geynnin, waxa aan bixinayaa shaadhka aan dawladda u xidhanay”. Maxkamadda ma waxa ay moodayaan xafiiskoodan xaaraanta ah ee ay baaddilka, duudsiga iyo dulmigu barriinsadeen? Hadduu shaadhka bixiyo ma cirka ayuu jeex dumayaa?
Aroornimadii Soo-roga (Sabtida) ee 30kii Julaay 2016ka ayaa hiirtii waaberi barxadda la isugu keenay dhammaan maxaabiistii ku xidhnaa Xarunta Taraafiiga, waxa kaabad ku soo fadhiistay ninka ku magacaaban Taliyaha Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka sidoo kalena ah Af-hayeenka Ciidanka Booliska Gaashaanle Sare Faysal Xiis Cilmi. Judhiiba mid ayuu ku yidhi “Orod ii keen diiwaankii xogta maxaabiista lagu ururiyay”.
Markii uu na arkayba afka ayuu gacanta ruubay “Maxaa raggaas maxkamadda loo geyn waayay? Jeelka ayaan u gudbinayaa, hebelow ii keen gal-dacwadeedkoodii”. Ma dad aan xukun ku dhicin, misna aan gelin dembi culus ayaa jeelka rumaan lagu geeyaa? Sidii aan warka ku hayay, Xabsiga Dhexe ee Hargeysi waa uu buuxay, mana qaadi karo maxaabiis kale. Laakiin ninkan indha-adaygga ayaa madax-maray.
Markii magacayga la yeedhiyay ayaa uu yidhi “Waa kii askariga la dagaallamay, waa nin kibirsan. Hadda sameeya gal-dacwadeedkiisa, oo maxkamadda u gudbiya. Ta kale khasaaraha uu geystay iyo juwanka lumayna waa shan boqol iyo toddobaatan kun oo Shilinka Somaliland ah (570,000 SL/SH)”. “Lacagta waa la bixin doonaa” ayaa aan hadalkii ku gaabsaday. Illaa wakhtigaa waxa aan ku wareersanaa xaddiga lacagta ah ee ay rabaan. Mid kastaaba xaddi gaar ah ayaa uu sheegayay. Intaas uu sheegayo saddex-laab in ku dhaw bay ka badan doontaa…
Saacado kaddib ayaa ay Taliyaha Ciidanka Nabadgelyada Waddooyinka u yimaaddeen ergo dhankayga ka socotay, walaw uu yidhi “Oodda ayaa laga qaadayaa maanta haddii Eebbe idmo, inta ka horreysana waxa aan isku keeni doonaa maxbuuska (Siciid) iyo askarigii ay is-maan-dhaafeen”, haddana ma arag meel uu jaan iyo cidhib dhigay maalintaas oo dhan. Dhawr jeer oo laga wacay khadka taleefankana, ma uu celin wax jawaab ah. Inkasta oo uu ballan noo qaaday, haddana dhuumasho dhabarku muuqdo ayaa uu ku muquurtay..
Walaw sharcigu dhigayay in subaxaas Soo-roga (Sabti) maxkamadda la i geeyo, la ima qaadin, la imana sii deyn. Saw maydaan arkay Faysal Xiis Cilmi oo ku dhaaranaya in ay maxaabiista 48 saacadood maxkamadda ku hor geeyaan maalin dhawayd?. Anigu maxkaxamad la’aan ayaan 36 saacadood ku xidhnaa meeshii laga caydhiyay ee taraafikada, maxkamadna la iima qaadin.
Waxa aan garan waayay wax talo-gal ah: Ma maxkamadda ayaa lagu kala baxayaa mise heshiis af-garad ah ayaa la gaadhayaa? Dhawr askari oo aan ka codsaday in ay war/go’aan iiga keenaan askarigii aan u xidhnaana, waa ay ka gaabsadeen. “Ma filayo in uu kuu imanayo. Ilaahay ha sahlo, ninkaas wixii galaa waa ay adkaadaan” ayaa ka mid ahaa weedhihii laga yidhi dhambaalkii aan gudbiyay.
Subaxnimadii Axadda ee sooyaalku ahaa 31kii Julaay 2016ka ayaannu galnay xaadiriintii maxaabiista, halkii ayaa uu ninkii ciidanka madaxda u ahaa ka bilaabay hiifkii, haaraankii iyo hanjabaaddii uu na huwin jiray. Wax ka fulay intii uu shalay ku handadayna ma garanayo. Sida awrka doobta leh ayuu dhibi listay, wuu qalaaday, qadaf iyo qodaxna wuu qaatay.
Maxaabiistina waa ay ka aammuseen yulqankiisa, waxa ay door-bideen in ay farriin u diraan oo ay u dacwoodaan Ilaahay. Tolow ninkaas miyaa la habaaray mise waa loo duceeyay? If iyo aakhiro mid uu galabsigiisa ku arkaba, waa la wada joogaa labada daarood.
Gaashaanle Faysal Xiis Cilmi waxa uu igu yidhi “Kibraani baad tahay, askari gaajoonaya ayaad la dagaallamaysaa. Bixi lacagta, waa lagu sii deynayaa”. Waxa aan waayay qof iga qabta lacagta aan naqadka ku hayo iyo cid aan u diro inta dhiman ee moobilkayga ku jirta. Iyada oo aan cidna loo xil-saarin habaynta iyo tirinta xaddiga la iga rabo ayaa ay madaxdii ciidanku magaalada u foof tageen. Laamiyada ayay ka qadhaabsanayeen. Xero dhan oo inta u sarraysaa waddooyinka tuban tahay, oo cid xaajo furdaamisaaba aanay joogin ma aragtay?
Saaxiibbadii hawshaas ila qaban lahaana waa ay daaheen oo xarunta ma ay imannin xilligii aanu ku ballannay. Qof ahaan, waxa aan qorshaystay in la joojiyo waanwaantii socotay oo maxkamadda la ii gudbiyo, haddii ay maalintaasna hawshu dib u dhacdo. Mar haddii ay i seejiyeen wanqashii degmada Ballimataan oo maalmahaas ahayd, micno ma ay lahayn in aan gudaha ku sii jiraa…
Iyada oo aanan ogeyn meel ay jaan iyo cidhib dhigeen taliskii xaruntu ayaa uu nin nala xidhnaa garaacay Marwo Aamina Gaafane oo ah ganacsade caan ah oo qaadka dalka keenta…. Bal sida hadalka Marwo Aamina Gaafane u soo dabbaalo raggii xero-weydaarka ahaa waynu eegi……. Halkaas ayaabu xal ka iman doonaa insha Allah..